सजिलो लघुवित्तको नाफा ९६९ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य वित्तीय सूचक कस्तो ? – Insurance Khabar
सजिलो लघुवित्तको नाफा ९६९ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य वित्तीय सूचक कस्तो ?
काठमाडौं । सजिलो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको वित्रयि विवरण प्रकाशित गरेको छ । लघुवित्तले यस अवधिसम्ममा ९४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लघुवित्तको नाफा ९६८ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा कमाएको थियो ।
हाल सजिलोको चुक्ता पुँजी १४ करोड रुपैयाँ छ भने रिजर्भ कोषमा ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा समेत आकर्षक बृद्धि गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १ करोड २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र खुद ब्याज आम्दानी गरेको सजिलो लघुवित्तले यो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बढाएर ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
यस्तै, लघुवित्तले संचालन मुनाफामा पनि बृद्धि गरेको छ । लघुवित्तले यस अवधिसम्म सञ्चालन नाफा पनि १४ लाख २५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ९६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुर्याउन कम्पनी सफल भएको छ ।
लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को चौथो त्रैमाससम्म ९ करोड २५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ७२ करोड ६८ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यसले ९९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
यस अवधिसम्म लघुवित्तको खराब कर्जा ० दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । कस्ट अफ फन्ड ११.६२ पव्रतिशत सजिलो लघुवित्तले सर्वसाधारणमा आइपीओ जारी गरेको छैन । यो नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्था हो ।